Xirfadlayaal Fiktooriya oo Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Bilaash Fiktooriyaanka Retro Vector Pack
Isbeddellada dib-u-socodka ah ee mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan uguna qurxoon ayaa ah Fiktooriya, muuqaal dhab ah oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa gothic iyo himilooyinkii ka adkaaday intii lagu jiray qarnigii sagaal iyo tobnaad ee boqortooyadii Victoria. In kasta oo ay ahayd isbeddel farshaxanimo oo had iyo jeer doonayay dabeecaddiisa, aasaas wanaagsan oo qeexan oo la taaban karo, runta ayaa ah in falsafadeed u gaar ah ay isu rogtay jahwareer waxaana jiray qayb aad u muhiim ah. Haddii aan ku dheganaano muujinta farshaxanka ee dhanka shaxdooda ugu muuqaalka badan, waxaan arki doonaa sida ay u jirto joogitaan xoog leh oo sawir ah habka matalaada.
U janjeedhada xarriiqyada qalooca, qaansoleyda iyo kobaca, iyo sidoo kale farta gacanta lagu qoro iyo dhismayaasha wanaagsan waa astaamo soo noqnoqonaya si loo qoro farriimo taxane ah oo ka hadlaya qiyamka falsafada iyo metaphysical ee lagu beddelay muuqaallada nolol maalmeedka oo ka tarjumaya kaamilnimada habka nolosha bulshada waagaas. Waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee aan ugu jeclahay qaababka dib-u-dhiska iyo in si wanaagsan loogu adeegi karo si loo dejiyo goobta loogu talagalay dhismayaasha taariikhiga ah, male-awaalka ah ama xitaa xog-ogaalka ah Halkan waxaan ku soo bandhigayaa xulasho sawirro ah oo noocan ah gebi ahaanba bilaash ah oo laga soo saaray webka Wareegyada Retro. Maskaxda ku hay in waxyaabaha laga soo dejiyey boggan ay gebi ahaanba bilaash yihiin illaa inta loogu talagalay in loogu isticmaalo shakhsi ama ganacsi, hase yeeshee si dib loogu qaybiyo ama loo iibiyo mid ka mid ah walxaha ay tahay inaad oggolaansho ka hesho webka.
Xarfaha hore ee qaabka gothic
Qurxinta Gothic iyo steampunk
Madaxyada caadiga ah
Gothic wuu kobcayaa
Sawirka jir ahaaneed
Sawirka Clown Classic
Nin Classic ah
Naag reer Victoria ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Bilaash Fiktooriyaanka Retro Vector Pack
11 casharro steampunk ah oo aadan tabi karin
Maareynta warbaahinta: Khiyaanooyinka ugu macquulsan ee lala adeegsado Adobe Photoshop